China Fanye ịkpụzi Manufacturer na Supplier | Meste
Fanye ịkpụzibụ a plastic injection ịkpụzi usoro ebe plastic na-agbara n'ime a oghere na gburugburu ihe ntinye mpempe ma ọ bụ iberibe enịm n'ime otu oghere dị tupu ịkpụzi. Ihe ngwaahịa a na-esi na ya pụta bụ otu mpempe akwụkwọ na ntinye ma ọ bụ ntinye nke plastik gbachiri.
Fanye ịkpụzi kọwakwuru ike nke plastic na ike inyere belata na-eri nke ngwaahịa site na ịmachi ego nke dị oké ọnụ ọla dị mkpa iji rụpụta ngwaahịa. Enwere ike iji ntinye ma ọ bụ plastik ọzọ tinye ya. Wasdị nhazi a ka emepụtara na mbụ iji tinye ihe ntinye eri na akụkụ ndị a kpụrụ akpụ na iji mechie njikọ nkwụnye waya na eriri eletriki.
Anyị na-agbatị usoro a iji mezuo ihe ndị ọzọ na-akpụzi na-enweghị ike ịme ma ọ bụ na-agaghị eme.
Dabere na akụkụ nke akụkụ ahụ, a pụrụ imepụta ebu nwere ọtụtụ oghere iji mụbaa mmepụta. Secondary post ịkpụzi arụmọrụ na-mgbe ụfọdụ chọrọ iji wuchaa nzukọ.
Fanye ịkpụzi bụ usoro ịkpụzi ihe eji akpụzi ahụ iji gbanye resin n'ime ntinye dị njikere yana ihe dị iche iche, na ngwakọta gbazee jikọtara ya na ntinye iji mepụta ngwaahịa agwakọtara. Akụkụ ndị agbakwunyere na-abụkarị akụkụ ígwè, kamakwa akwa, akwụkwọ, waya, plastik, iko, osisi, mgbanaka waya, akụkụ eletriki.
Usoro atụmatụ nke Fanye ịkpụzi bụ ndị a:
1. Ọ dị mkpa iji tụlee Nchikota na mgbakwunye nke resin dị mfe formability, ekwe, siri ike ígwè, ike na-eguzogide okpomọkụ, ka na-eme ka mgbagwoju anya na-atọkwa metal plastic ike ngwaahịa.
2. Karịsịa, a na-eji nchikota nke mkpuchi resin na arụmọrụ nke ígwè, ngwaahịa ndị e guzobere nwere ike izute ọrụ ndị bụ isi nke ngwaahịa eletriki.
3. Ngwakọta ngwakọta nke ọtụtụ ntinye na-eme ka njin post nke ngwaahịa ngwakọta nwee ezi uche.
4. Fanye ngwaahịa abụghị nanị ọla, kamakwa akwa, akwụkwọ, waya, plastik, iko, osisi, eriri igwe, akụkụ eletriki, wdg.
5. Maka ngwaahịa na-agbanwe agbanwe na ngwaahịa na-agbanwe ngwaahịa na roba, ọ ga-ezere ọrụ mgbagwoju anya nke ịhazi mgbanaka akara ahụ mgbe emechara ngwaahịa ndị ahụ site na ịkpụzi ọgwụ na mkpụrụ, nke na-eme ka akpaka jikọrọ usoro ndị na-esote dị mfe.
6. N'ihi na ọ bụ nkwonkwo nke wụrụ awụ ihe na metal inserts, ọdịiche dị n'etiti metal inserts nwere ike e narrower na ịkpụzi pụrụ ịdabere na mejupụtara ngwaahịa dị elu karịa nke pịa na ịkpụzi ..
7. Họrọ resin kwesịrị ekwesị na ọnọdụ ịkpụzi, ya bụ, maka ngwaahịa dị mfe mmebi (dịka iko, eriri igwe, akụkụ eletriki, wdg), ha nwekwara ike mechie ma mezie ya site na resin.
8. Na Nchikota vetikal injection ịkpụzi igwe na manipulator, dum set nke inserts na na, ọtụtụ nke wet ịkpụzi oru nwere ike na-aghọta akpaka mmepụta.
9. mgbe etinyere etinyere, ọ nwekwara ike-eme ka n'ime ngwaahịa na oghere oghere mgbe isi oghere mwepụ ọgwụgwọ.
Atụmatụ maka akụkụ akụkụ na ebu nke ịkpụzi ịkpụzi
1. Ihe achọrọ maka ihe ntinye: ike, isi agbaze, isi ike, ịda mba
2. Ma ọdịdị na nha nke ntinye ahụ dị mma maka iwere, itinye na ntinye. Nhazi nke akụkụ ga-adaba maka nrụnye na ndozi na ebu iji gbochie akụkụ ahụ site na ntụgharị ma ọ bụ ịtọpụ n'okpuru mmetụta nke mmiri na-asọ.
3. Imepụta ziri ezi ma na-agbanwe agbanwe nke ntinye
4. Họrọ ihe kwesịrị ekwesị ebu Ọdịdị, na inserts nwekwara ike-emechi kpamkpam n'ime resin.
5. ingme shrinkage nke metal insert dị mfe ịbụ mkpumkpu. A ga-eme ule nyocha nke ọdịdị na nha nha nke akụkụ dị mkpa n'ọdịnihu.
6. N'oge usoro ogwu ahụ, ihe ntinye ígwè dị mfe nrụrụ na ngbanwe, ya mere ihe nkedo ebu na nhazi nke akpụzi nke dị mfe iji dozie ntinye ígwè kwesịrị ịtụle ya. Maka ngwaahịa ndị enweghị ike ịgbanwe ụdị ha, ule dị oke mkpa.
7. Kwenye ma ọ bụrụ na ihe ntinye batrị chọrọ preheating ma ọ bụ ọgwụgwọ ihicha. Ebumnuche bụ iji hụ na ngwaahịa dị mma ma mee ka ọ kwụsie ike.
Metal wet ịkpụzi Metal wet ịkpụzi bụ kasị ọtụtụ ebe ada wet ịkpụzi usoro.
Ngwongwo nke ígwè a na-akpụzi bụ ụdị usoro iji dozie ihe ntinye ígwè na ọnọdụ kwesịrị ekwesị na ebu ahụ tupu oge eruo, wee gbanye plastic maka ịkpụzi. Mgbe ebu emeghe, etinyere na-ọbọp ke ngwaahịa site obi jụrụ na-ewusi plastic ka ngwaahịa na inserts dị ka threaded mgbanaka na electrode.
A choro ka akuku ihe eji etinye ihe eji eme ihe kwesiri inwe okwa kwesiri ekwesiri inwe ya, na akuku ihe edozi nke edozi na ebu nwere ike iguzo ngwa ngwa ma dikwa nfe iji gbochie plastik ka oghara n'ime oghere ndi edozi. Ihe ntinye ndị ahụ dịkwa mkpa ka e mepụta ha n'ụzọ pụrụ iche, dịka nkwekọrịta, ntugharị, ịgbagọ, wdg.
Ahaziri metal wet ịkpụzi akụkụ:
Mestech bụ a pụrụ iche na ngwa nke wet ịkpụzi .. Biko kpọtụrụ anyị na-enyere gị aka ịchọta ezi wet ịkpụzi ngwọta maka gị na ngwa.
Ike nkwụnye fanye injection ịkpụzi
Ọla kọpa nut ịkpụzi
Nkenke metal efere tinye ịkpụzi
Metal aku fanye ịkpụzi
Nke gara aga: Na-akpụzi cochọ Mma-IML
Osote: Metal prototype
3d E Bipụtara Ebu ntinye
Ọgwụ na ịkpụzi threaded Inser
Fanye Ọgwụ Nkedo
Mgbanwe na-agbanwe agbanwe
Onye na-agba ọsọ na-ekpo ọkụ
Plastic ebu maka laser ntutu mwepụ igwe